Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay qodobbo dastuurka ka mid ah oo isbadal lagu sameeyay | raascasayrmedia.com
← Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan dagaallo maanta ka dhacay degmooyin ka tirsan Gobolka Banaadir
Faah Faahi Banaanbixii Faroole lagu diidanaa ee Gaalkacayo →
Xildhibaannada Baarlamaanka Soomaaliya oo ansixiyay qodobbo dastuurka ka mid ah oo isbadal lagu sameeyay
Xubnaha baarlamaanka ayaa maanta ansixiyay qodobbo ka mid ah dastuurka KMG ah ee Soomaaliya kuwaasoo isbadal lagu sameeyay uuna ka mid yahay qodobka ka halaya muddada uu madaxweynuhu xilka haynayo.
Mudanayaashii kulankii maanta ka Golaha Shacabka soo xaadiray oo gaarayay 389-xubnood ayaa waxay kaga doodeen dib u eegista axdi-qarameedka xukuumadda iyo howlaha horyaalla baarlamaanka muddada kala guurka ah, waxaana shir guddoominayay afhayeenka baarlamaanka Shariif Xasan Sheekh Aadan.
Guddiga dastuurka iyo arrimaha federaalka baarlamaanka oo soo qoraalka ku saabsan qodobbada dastuurka ee isbadalka lagu sameeyay ayaa waxaa u akhriyay baarlamaanka xildhibaan Maxamed Nuur Sheegow oo guddiga ka tirsan.
Qodobbada laga dooday ee isbadalka lagu sameeyay oo qaarkood la ansixiyay ayaa waxay kala ahaayeen: qodobka 29-aad, qodobka 30-aad, qodobka 36-aad, qodobka 43-aad, qodobka 45-aad, qodobka 49-aad, qodobka 52-aad iyo qodobka 53-aad.
Waxaa qodobbada la ansixiyay ka mid ahaa: qodobka 43-aad oo sharraxayay xilliga uu madaxweynuhu xukunka haynayo kaasoo dhigayay in madaxweynuhu uu xilka haynayo muddo saddex sano ah iyo 45-aad oo qeexayay in madaxweynuhu haddii uu xilka gudan waayo ama uu geeriyoodo ay xildhibaannadu ay muddo hal bil ah ku soo doortaan madaxweyne cusub.
Sidoo kale qodobbada la ansixiyay ayaa waxaa ka mid ahaa: qodobka 49-aad oo ka hadlayay kalsooni siinta xukuumadda, kaasoo lagu qeexay in codka kalsoonida lagu siinayo xukuumadda ay noqonayso mid qarsoodi ah.
Kalsooni kala laabashada xukuumadda ayaa la sheegay inay soo-jeedin karan 50-xildhibaan iyadoo codka loo qaadayo kalsooni kala laabashada xukuumada uu isna noqonayo mid qarsoodi ah.
Ugu dambeyn, guddoomiyaha baarlamaanka Shariif Xasan oo shirka soo xiray ayaa ku dhawaaqay codkii la geliyay ansixinta qodobbada dastuurka ee maanta laga dooday, isagoo sheegay in 379-mudane ay ogolaadeen, laba mudane ay diideen halka sideed xildhibaan oo kalena ay ka aamuseen, sidaa daraadeedna ay yihiin qodobbadaas kuwo ansax ah.